आमा बन्दै छिन नायिका श्वेता खड्का ! – Paluwa Khabar
माघ ८, २०७७ बिहिबार 30
आमा बन्दै छिन नायिका श्वेता खड्का !सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का । चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छन। उनी अभिनीत चलचित्र ‘कान्छी’ दुई वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको थियो।
अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी हुन् । ‘हुर्रे’, ‘मेरी मामु’ र ‘रज्जा रानी’ निर्देशन गरेका यमको निर्देशनमा बन्ने नयाँ चलचित्रमा श्वेताले काम गर्न लागेकी हुन्।
चलचित्रमा उनी आमाको भूमिकामा देखिने छिन्। चलचित्रले आमा र छोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा भन्ने छ। कोरोना महामारी र लकडाउनको अवस्था सहज हुनेबित्तिकै चलचित्रको छायांकन सुरु हुने बताइएको छ।
चलचित्रमा छोरीको भूमिकामा सेड्रिना शर्मालाई लिने प्रयास भइरहेको छ। डेब्यु चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट लभर गर्लको भूमिकामा देखिँदै आएकी श्वेतालाई पहिलो पटक दर्शकले भिन्न भूमिकामा देख्न पाउनेछन्। चलचित्रमा उनको केन्द्रीय भूमिका छ। *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Prevयसरी नेपाल टेलिकमको सिमबाट फ्री मा इन्टरनेट चलाउनु होस् , तुरुन्तै हेर्नुस्
NextBreaking news;> कक्षा १२ को नतिजा सार्बजनिक ! कसरि हेर्ने रिजल्ट? हेर्नुहोस् पूरा विवरण…
एकाविहानै धनुषाबाट आयो अत्यन्तै दुःखद खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला:
हामी आधिकारिक हौं, केपी ओलीहरू समानान्तर हुन् — घनश्याम भुसाल
बर्दियामा एक सय महिलाका लागि कृषि सामाग्रि बितरण